I-Apartamentos uLina: ene-terrace kunye negadi - I-Airbnb
I-Apartamentos uLina: ene-terrace kunye negadi
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguPiper
Indawo efanelekileyo yeentsapho ezinethafa, ngaphantsi komzuzu ukusuka eLa Garita Beach. Yiza, phumla kwaye uzive usekhaya. Yonwabele igadi yam, hamba ujikeleze le lali intle yabalobi kwaye ufumanise ukuba kunjani ukuhlala e-Arrieta. Ndiza kuqinisekisa ukuhlala kwakho akulibaleki.
Le ndlu igcwele zonke iintlobo zezixhobo: ioveni, imicrowave, umatshini wokuhlamba kunye neA/C. Nangona, ukuba ufuna nayiphi na enye into (umzekelo, ibhedi), konke okufuneka ukwenze kukubuza kum.
ILa Garita yindawo ekhethekileyo kakhulu. Ukuba nolunye lolona lwandle lubalaseleyo eLanzarote kunye nepaki ekufutshane nemivalo yaselwandle, ilungele iintsapho ezinabantwana. Nangona kunjalo, ukuba amaza arhabaxa, unokuhlala uhla uye e-El Charcón: "ichibi" elizolileyo lendalo. I-Arrieta ikwabonelela ngeendawo zokutyela ezininzi kunye neevenkile apho unokufumana nantoni na onokuyidinga.
Umbuki zindwendwe ngu- Piper
Soy una traductora, aficionada a los viajes. Gestiono la cuenta de AirBnB de mi abuela para que todos puedan disfrutar de mi pueblo tanto como yo lo hacía en mi infancia. :)
Ndiya kufumaneka ngokupheleleyo ngexesha lokuhlala kwakho; yiza ngapha kwe next door. Nangona ndithetha iSpanish kuphela (umzukulwana wam ulawula iakhawunti yam yakwa-Airbnb), ndiya kuzama ukukunika iingcebiso ndize ndisombulule yonke imibuzo onokuba unayo.
Ndiya kufumaneka ngokupheleleyo ngexesha lokuhlala kwakho; yiza ngapha kwe next door. Nangona ndithetha iSpanish kuphela (umzukulwana wam ulawula iakhawunti yam yakwa-Airbnb), ndiy…
Iilwimi: English, Français, 日本語, Español
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Arrieta, Lanzarote